Vox- Pop-25-06-2013 Panos South Asia Climate Change Blog | Page 2
Posted on June 26, 2013 by dhrubarajsapkota
Posted in Dhruba Raj Sapkota, Uncategorized	| Leaveareply
Posted on June 25, 2013 by niloferdsouza
Today, President Obama is expected to announceanational plan for climate change in the US. Last week, the White House releasedavideo leading up toaspeech he would give today at Georgetown University.
In the video, President Obama says, “There’s no single step that can reverse the effects of climate change.” But when it comes to the world we leave our children, we owe it to them to do what we can.”
Read more: http://forbesindia.com/blog/technology/environment-apps-for-children/#ixzz2XECRnA8l
Posted in Climate Change, Nilofer D'Souza	| Tagged Climate change, environment, environment apps, India, President Barack Obama, technology	| Leaveareply
Posted in Climate Change, Extreme weather events, Global warming, John Upton	| Leaveareply
The deluge is upon us
Posted on June 23, 2013 by gopikrishna
The news reports and images coming from Germany in the last fortnight were ironic. In the city of Bonn negotiators fought over the agenda of an international climate change meeting, as floods affected other parts of the country when river Elbe overflowed its banks due to heavy rains. … MORE…
Posted in Climate Change, Extreme weather events, S. Gopikrishna Warrier	| Leaveareply
now farmers will get bt tur
June 22, 2013 by pradeepnanandkar
Posted in Author, Pradeep Nanandkar	Tagged after bt cotton bt tur	Leaveareply
व्ाातावरण जैविक विविधता र जलवायू परिवर्तन
Posted on June 20, 2013 by dhrubarajsapkota
प्ाृृथ्वीको प्राकृतिक अवस्था जोगाउन र मानव जीवन सहज बनाउन वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको सह-अस्तित्व कायम गर्न जरुरी हुन्छ ।
यसकालागी वनस्पति एवं वनजंगल संरक्षण उत्तिकै आवश्यक हो ।व्ानस्पति यस्ता वस्तु हुन जस्ले सौर्य उर्जालाई रासायनिक उर्जामा रुपान्तरण गर्दछन । यस प्रक्रियालाई प्रकाश संश्ालेषण भनिन्छ । यदि वनजंगल र वनस्पति नभए सौर्य उर्जा पारिस्थितिक प्रणालीका खाद्म सञ्जालको रुपमा जान सक्दैन । जस्ले पारिस्थितिक प्रणाली नै सिर्जित हुन पाउदैन । अनि सजिव र निर्जिवहरुको अन्तरसम्बन्ध कायम नभएपछि पर्यावरण भन्ने कुरा हुदैन, यसबाट पनि वनस्पति र वातावरणको अन्योन्याश्रति सम्बन्ध बुभ्fmन सकिन्छ ।
ब्ाोटबिरुवा तथा वनस्पतिहरुले कार्बनर्डाईअक्र्साईड ग्याँसलाई सोसेर लिन्छन र त्यसबाट आफुलाई आवश्यक पर्ने खाना बनाँउछन र अक्सिजन फल्दछन जुन हामीलाई र अन्य जीवजन्तुलाई अत्यावश्क छ । यसरी बनजंगल बोटबिरुवा तथा वनस्पति र जीवजन्तुबिच जीवनन्तता को अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहन्छ । कार्बनभण्डारको काम गर्ने हुनाले वनजंगलले जलवायूपरिवर्तनको प्रभाव कम गर्ने काम गर्छ । वनस्पतिलाई पृथ्वीका सम्पर्ुण्ा जीवहरुको बाँच्ने आधार श्रृजन गर्ने तत्वको रुपमा बुझिन्छ ।जस्ले यहाको पारिस्थितिकय परिणामलाई सन्तुलित राख्न महत्वपर्ुण्ा योगदान पुर्‍याईरहेको हुन्छ ।
यसैगरि विभिन्न प्रकारका वनस्पतिका प्रजाति र जीवजन्तु विघमान रहने स्थान पनि त्यहि हो । तिनीहरुलाई पनि उपयुक्त तापक्रम हावापानी र बाँच्ने वातावरण आवश्यक पर्छ । एक अवस्थामा रहेका बसेका तिनीहरु ब्ादलिदो जलवायूमा अनुकुलन हुन असक्षम भई तिनीहरुको अस्तित्व संकटमा पर्छ र कतिपय जात्रि्रजाति लोप हुन्छन । यसैकारण वातावरणीय सन्तुलन कायम जरुरी परेको हो ।
कार्बर्नको उर्त्र्सजन वा उत्पादन नगरेर अथवा कार्बन उर्त्र्सजन हुने गतिविधि कम गरेर र उत्र्सर्जित कार्बन शोषण हुने प्रक्रिया बढाएर यसको सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ । वनविनास रोक्ने र वृक्षारोपण गर्ने यसैकालागी आवश्यक छ । यसकालागी एकठाँउ, एकगाँउ, एक व्यक्ति र एक प्रयासमात्र प्राप्त हुदैन , सामुहिक प्रयास र प्रतिबद्धता खाँचो पर्छ । प्राकृतिक श्रोत र साधन जस्तो घामको प्रकाश, हावा वषर्ा,, सामुन्दि्रक छाल र भु-तापबाट उत्पादित नविकरणीय उर्जामा जोड दिन सके पनि जलवायू परिवर्तनको असर कम हुन्छ । किनकी यी उर्जाका श्रोत प्राकृतिकरुपमा पुनः पर्ूर्ति हुन्छन । यसैगरि यसका लागी प्राकृतिा श्रोतमाथीको निर्भरता घटाएर, उर्जा बचत गरेर वृक्षारोपण गरेर पेट्रोlmयम पदार्थजन्य यातायातको प्रयोग कम गरेर वातावरणमैत्रि र प्रवृघि र उत्पादनमा प्रयोग गरेर र कम प्रयोग, पनः प्रयोग र पुनः प्रशोधनका पद्धति एवं विधिहरु अपनाएर जलवायू परिवर्तनलाई अनुकुलन पार्न सकिन्छ
मानब जीबन विभिन्न प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुमा निर्भर भएको हुन्छ । जतिपनि खाद्य बस्तु उपलब्ध छन् ती सबै बनस्पति स्रोतका आधार हनु । बनस्पतिहरु ज्डिबुटिका रुपमा निमार्ण्र्ााामाग्री र इनधनका रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । नेपालका भौगोलिक विबिधताका कारण यहाँ विश्वभर पाइने प्रायः सबै प्रकारको हाबापानी, जीबजन्तु र बनस्पति लगायतका प्राकृतिक सम्पदा र जैबिक बिबिधता उपलब्ध छ । प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण एवं प्रबद्धन र दिगो उपयोगबाट मुलुकका आर्थिक विकास र बातावरण मैत्ती बिकास अगाडी वढाउन सकिन्छ । तर्सथ राष्ट्रको बिकास यिनै स्रोतको सदुपयोग र संरक्षणबाट सम्भब छ ।
हाल हाम्रो वातावरणमा देखा परेको जलवायूपरिवर्तन र त्यसले सिर्जित गरेका असरहरु न्यूनिकरण गर्न र अनुकुलित हुनकालागी वनजंगल तथा वनस्पति संरक्षण गर्न अनिवार्य छ । वनजंगल एवं विविध वनस्पतिले पृथ्वीमा जीवित वातावरणको सिर्जना गरिरहेका हुन्छन । वनजंगल र वनस्पतिको विनाशको कारण मौसम परिवर्तन हरितगृह ग्याको उर्त्र्सजन व्ािश्व तापमानमा वृद्धि र जलवायू परिवर्तन लगायतका असरहरु देखा परेका हुन ।
जलबायु परिवर्तन भनेको सामान्य र नियमित मौसम परिर्वतनको प्रक्रियामा देखिएका असामान्य र अनियमित परिर्वतन हो । जलबायुको तथ्याङकीय विश्लेषणबाट पहिचान भएको जलबायुमा आएको फरक पनि त्यहि हो । सामान्यतया जलबायुलाई समग्र मौसमको औशतको घटवढका लक्षणका आधारमा परिवर्तनका पहिचान गरिन्छ यो बैज्ञानिक अबधारणा पनि हो भन्न सकिन्छ । सामान्य तया ३० वर्षो अबधिमा मौसममा आएको परिबर्तनको तथ्याङक हिसाब गरेर जलबायु परिवर्तनको परिणाम निकालिन्छ । मौसम र जलबायुको भिन्नतालाई निश्चित समय अबधिमा गरिएको मापनलाई आधार मानेर छुट्याउन सकिन्छ । मौसमलाई मानिसहरुले प्रत्यक्ष अनुभब र महसुश गर्न सक्छन् तर जलबायु प्रत्यक्ष रुपमा अनुभब गर्न सकिन्न ।
मौसम बायुमण्डलको प्राकृतिक अबस्थाबाट उत्पन्न हुन्छ भने जलबायु परिबर्तन मानबीय क्रियाकलाप र केहि पृथ्बीमा हुने उथलपुथलका कारण इन्धन अत्याधिक हरितगृह ग्यासहरु उत्र्सर्जित हुँदा हाम्रो बाताबरण वा पृथ्वीको तापमानमा बृद्धि भई जलबायु परिवर्तन हुन्छ । सौर्य बिकिरणको फरकपन र ज्वालामुखि बिस्फोटन जस्ता प्राकृतिक घटनाका कारण पनि जलबायुमा परिबर्तन आउँछ । जलबायु परिबर्तन पृथ्बीको प्राकृतिक सन्तुलनमा गडबढिले गर्दा हुन्छ । पृथ्वीमा सौर्य बिकिरणबाट ताप शक्ति प्राप्त हुन्छ र यहि सौर्य बिकिरणका कारण पृथ्बीको बायुमण्डलको तापक्रम सन्तुलन रहन्छ । पृथ्बीले जति सौय बिकिरण प्राप्त गर्छ त्यतिकै बिकिरण अन्तरिक्षमा पनि पठाउँछ जसले गर्दा पृथ्बीको बायुमण्डलको तापक्रमसन्तुलन रहन्छ । पृथ्बीले जति सौय बिकिरण प्राप्त गर्छ त्यतिकै बिकिरण अन्तरिक्षमा पनि पठाउँछ जसले गर्दा पृथ्बीको बायुमण्डलको तापक्रम स्थिर रहन्छ । कुनै कारणबस बिकिरणमा घटबड भई असन्तुलन भएमा पृथ्बीको जलबायु परिबर्तन हुन्छ । पृथ्बीको तापक्रम र्सर्ुयको तापबाट मात्रा नभै पृथ्बी भित्र सिर्जित मानबीय कारणले पनि वढ्छ । पृथ्बी माथीको बायुमण्डलको संरचना नै बदलिदै गएको छ यसले गर्दा जलबायु परिवर्तन भएको छ र त्यसले नकारात्मक असर पारेको छ ।
वातावरणमैत्री आर्थिक विकास र विकास निर्माणले वातावरणको अन्यान्यायश्रति सम्बन्ध कायम राख्छ । यसरी अगाडी बढदा मात्र वातावरण र विकास मिल्न सक्छ र दिगो विकास हुन्छ । त्यसो नगरि विकासको नाममा वातावरण विनास भई दर्ीघकालमा मानवजीवनमा ठुलो असर पर्छ ।
त्यसको परिणीती हो, अहिले देखापरेको जलवायू परिवर्तन र त्यसको असर । यसैकारण वातावरण मैत्रीविकासका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नर्ुपर्छ र जलवायू परिवर्तनका असरहरुलाई न्यूनिकरण र अनुकुलित गर्न मद्दत पुर्‍याउछ । कार्बन उतर्सजन दिनप्रतिदिन बढदै गैरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीको प्रतिवेदन अनुशार कार्बन उर्त्र्सजन सन २०१२ मा हालसम्म्ाकै उच्च्ा रहेकोछ । कार्बन उर्त्र्सजन १ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
जलवायू परिवर्तन गराउन कार्बनर्डाईअक्र्साईड ग्याँसको दर्ुइ तिहाई र अन्य हरितगृह ग्याँसहरुको एक तिहाई भुमिका हुन्छ । त्यसैले वनजंगल /mखबिरुवाको संरक्षण गर्न सकेमात्र कार्बनर्डाईअक्र्साईडको उर्त्र्सजनमा कमि ल्याउन सकिन्छ, र जैविक विविधताको संरक्षण हुन्छ । वनस्पति तथा बिरुवाहरुले कार्बनर्डाईअक्र्साईड ग्याँसलाई खान बनाउन -फोटोसेन्थेसिस ) सोसेर दिने हुनाले वातावरणमा यसको प्रभाव न्यून हुन्छ ।
वनजंगल एवं वनस्पति विनास गरि ओघौगिक प्रक्रिया अगाडी बढाउदा अत्याधिक कार्बन उर्त्र्सजन भई वातावरणमा असन्तुलन पैदा हुन्छ । यसकारण कार्बन उर्त्र्सजन घटाउनका लागी उघोग तथा कलकारखाना एवं यातायातका साधनबाट निस्कने औघौगिक ग्याँसलाई फिल्टर गर्ने र यिनिहरुको सञ्चालनमा नियमन गर्न जरुरी छ । त्यो नगरिए जलवायू परिवर्तनका असरहरुबाट सिर्जित समस्याहरु ऋझ भयावह बन्न्ा सक्छन । जसका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने, जलभण्डार सुक्ने, तापमान वृद्धि हुने, जीव तथा वनस्पतिहरु ल्ोप हुदै जाने र मानव जीवन कष्टकर बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
वातावरणिय ह्रासबाट मानव, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक विषयवस्तुलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्छ । यसकारण यस्तो प्रभावलाई यथासक्यै कम गर्दै लैजान पर्छ र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न एवं प्राकृतिक श्रोतसाधनको समुचित सदुपयोग आवश्यक छ । त्यसका लागी वातावरण संरक्षण जरुरी हुन्छ । आर्थिक विकास र विकासनिर्माण तथा विकासका योजना आयोजना र परियोजनाबाट जैविक विविधताको सम्बन्ध सहअस्तित्व र सन्तुलन ब्रि्रन नदिन पनि उत्तिकै सचेत रहनु जरुरी हुन्छ । असन्तुलित वातावरणबिच्ाको विकास अधुरो र अपर्ुण्ा हुन्छ । र यसले दर्ीघकालमा नराम्रो हानी पार्छ । यसैको परिणाम अहिलेको जलवायू पविर्तन हो ।
सन्तुलित स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम भएन भने जीवनयापन असहज बन्दछ । वातावरण र विकासलाई बुझन सकिएन भने र वातावरणमैत्रि विकास गरिएन भन्ो वातावरण प्रदुषित बन्छ । प्राकृतिक श्रोत र साधनहरु एवं स्वस्थ वातावरण भाबी पुस्तालाई जस्ताको त्यस्तै हस्तान्तरण गर्ने अहिलेको पुस्ताको दायित्वर जिम्मेबारी पनि हो ।
वनजंगल वनस्पति र जैविक विविधता संरक्षण गर्न सकिए वातावरणको पनि दीघो संरक्षण हुनछ भन्ने कुरा हामीले बुझनु जरुरी छ । वनस्पतिहरुले प्राणवायू – अक्सिजन ) उत्पादन गरिरहेका हुन्छन । व्यापक वनजंगल फडानी तथा कटानीबाट हरितगृह ग्याँसहरु कार्बनर्डाईअक्र्साईड अयद्द मिथेन अजद्ध ओजोन यघ पानीको बाफ जद्दण् नाईटसअक्र्साईड लद्दय र हृयालोकार्बन उर्त्र्सजनमा वृद्धि भई वातावरणीय तापमान बढछ, फलस्वरुप जलवायमाू परिवर्तन आई हामीलाई हानी गर्छ । हिँउ पग्लिएर हिमालको अस्तित्व संकटमा पर्नु अतिवृष्टि, अनावृष्टि बाढीपहिरो, हावाहुरी सुख्खा लगायतका प्राकृतिक प्रकोप यसैका विषेशता हुन ।
बातावरण पृथ्बीमा विद्यमान प्रकृति प्रदत्त प्राकृतिक जिब बस्तु आदीको समग्र अबस्था हो जुन बायुमण्डल भित्र अबस्थित हुन्छ । पृथ्बीलाई घेरेर रहेको ग्यास जन्य अबतरणलाई बायुमण्डल भनिन्छ । जसमा हरितगृहमा ६ प्रकारका ग्यासहरु हुन्छन् । यसै बायुमण्डल भित्रका सम्पर्ूण्ा अबस्थालाई बाताबरण भनिन्छ । वातावरणीय शिक्षा प्रारम्भिक तहबाटै सुरु गर्न अनिवार्य भएकोछ । जसबाट वनस्पति, जैविक विविधता र मानव बिचको अन्तरसम्बन्ध तल्लो तहसम्म लैजान मद्दत गर्छ । अनि वातावरणिय सन्तुलन र सम्पदा संरक्षण भई प्राकृतिक जोखिम तथा विपदको न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । त्यसरी नै जलवायू परिवर्तनका असर न्यूनिकरण र अनुकुलनका विधि एवं पद्धतीप्रति हामी र्सतक र सहज हुन सक्छौ ।
पृथ्बीको प्राकृतिक हरितगृह प्रभाबले पृथ्बीमा जीबनको लागि उपयुक्त बाताबरण श्रृजना गरिरहेको हुन्छ । पृथ्वीको प्राकृतिक हरितगृह प्रभावले जीवन संभब भएको हो । जब र्सर्ूयको ताप पृथ्बीमा आउँछ बायुमण्डल र पृथ्बीको सतह न्यानो हुन्छ अनि पृथ्बीको तापको केहि अंश फिर्ता पनि जान्छ । हरितगृह ग्याँसले र्सर्ूयको ताप र प्रकाशलाई पृथ्बीबाट परिवर्तन पनि गर्छ साथै सो ताप र प्रकाशलाई केहि मात्रामा बायुमण्डलबाट बाहिरिन बाट पनि रोक्छ । यसै प्रकृयाबाट पृथ्बी न्यानो हुन्छ । यसरी पृथ्बीको बायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको तापको प्रभावलाई सञ्चय गर्ने प्रकृयालाई हरितगृह प्रभाब भनिन्छ । यसैले जिबन सहज बनाउँछ ।
यद्यपि खनिज इन्धनको अत्याधिक प्रयोग औद्योगिक क्रियाकलाप र बन बिनाश लगायतका मानबीय गतिविधिले हरितगृह प्रभाबमा बृद्धि भई विश्वब्यापी उष्णीकरणमा बृद्धि भइरहेको छ । यो नै हाम्रो लागि चुनौतिको विषय हो । फलतः जलबायु परिवर्तनले थपेका समस्याहरु भ्ाोगिरहेका छौ ।
ब्ाोटबिरुवा र जैविक विविधतााबाट जैविक मल विषादि उत्पादन गर्न सकिन्छ । जसबाट रासायनिक मल विषादि प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ । अनि पर्यावरणीय तथा वातावरणिय प्रदुषणमा कमि ल्याउन सकिन्छ । जसबाट कार्बनर्डाईअक्र्साईड कम भएर वातावरणिय सन्तुलन कायम रहन्छ । मानवजाति लगायतका जैविक विविधता प्रत्यक्ष वा परोक्ष एकअर्कामा निर्भर वा अन्तरसम्बन्धित रहन्छन । मानविय आवश्यकताको सीमा फराकिलो हुदै जाँदा जैविक विविधताको विनास वनस्पति एवं वनजंगलको ह्रासका तथ्य हाम्राृ सामू छ । अहिले वनस्पति वनजंगल जैविक विविधता लगायत वातावरणबाट प्राप्त लाभको सहि विशलेषण सबै समक्ष नपुग्दा वातावरणमा नकरात्मक असर परेको हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।